Momba anay - Huaian Shengda Machinery Co., Ltd.
Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Huai'an, tanànan'i Huai'an, miaraka amin'ny velaran-trano mihoatra ny 60.000 metatra toradroa sy orinasa lehibe 6 ankehitriny. Ny orinasa dia nanolotra ivon-toeran'ny milina lehibe marindrano sy marindrano am-polony voalohany avy amina mpamokatra fanta-daza toa ny Doosan, Japan Sun Industrial Machinary Co., Ltd.Manana fitaovana maherin'ny 200 isan-karazany ihany koa ho an'ny milina CNC. ary fitaovana manokana. Nanangana ivon-toerana fitiliana sy laboratoara kilasy voalohany toa ny CMM. Mpiara-miasa maharitra amin'ny orinasa hammer hydraulic excavator dia misy ny Sany Heavy Industry, XCMG, SDLG ary ireo indostrian'ny indostrian'ny milina fananganana hafa.
Ny tambajotra fivarotana vokatra an'ny orinasa dia mandrakotra faritany 28 sy faritra any Sina. Nahazo mari-pahaizana ISO9001: 2016, EU CE ny orinasa.
Ny orinasa dia manana injeniera zokiolona, ​​mpilatsaka ho dokotera manana talenta teknolojia avo lenta, namorona ekipa fikarohana sy fampandrosoana vaovao tsy miankina mahomby. Ny orinasa dia nanana patanty 30 mahery. Nanjary orinasam-pifandraisana lehibe izy io ary mpandika Hydraulika marani-tsaina miaraka amina habe, kalitao avo lenta ary teknolojia avo lenta ao amin'ny indostria.
Akora-fitrandrahana harena an-kibon'ny tany- Fanodinana- Fitsaboana hafanana- Fitotoana volo- Hivory- Fitsapana- Fandokoana- fonosana
Misafidy akora tsara kalitao izahay, ary mampiasa CMM marobe hanatanterahana ny fizahana rehetra amin'ireo singa fototra toy ny varingarina sy ny piston mba hiantohana ny endrika sy ny fandeferana amin'ny toerana ary ny kalitaon'ny fivoriambe.
Nahazo mari-pankasitrahana ISO9001: 2016, EU CE ny orinasa. Ireo mpiara-miasa maharitra amin'ny hammer hydraulic excavator dia misy ny Sany Heavy Industry, XCMG, SDLG ary ireo orinasa goavambe fananganana indostrialy hafa.